Dhagabadan oo u digay kooxo dadka ku dhiba dareyska ciidanka
Updated About:288 days ago 0
Abaanduulaha ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed, General C/kariin Faarx Dhagaban ayaa digniinti ugu cusleyd u diray kooxo dareyska ciidanka ku dhiba dadka rayidka ah.
Wareysi uu siiyey mid ka mid ah idaacadaha ka howlgala magaalada Muqdisho ayuu ku sheegay in ay la kulmi doonaan abaal marin ah dil qofki lagu arka isaga oo wata dharka ciidanka isla markaana dhibaya shacabka.
Hadalkaan ayaa imaanaya kadib marki maalmihi lasoo dhaafay ay ciidamada dowlada ku dileen degmada Afgooye iyo deegaanada hoos yimaado ilaa iyo 4 ruux oo sida la sheegay ku labisnaa dareyska ciidanka isla markaana dhac u geysanayey dad rayid ah.
“Hadaba waxaan u jeedinayaa digniin waxaan leeyahay umada dhibka ka dhaafa dadka tuutaha ciidanka gashta ee dadka dhibaya taariikh ayaad la kulmi doontaan gacan adag ayaana idinku qaban doona “. ayuu yiri.
Dowlada KMG Soomaaliya ayaa waxyaabihi ay ku fashilantay ka mid ah wax ka qabashada qaar ka mid ah ciidamada dowlada oo dadka rayidka ah dhiba, iyo qaar kale oo soo gshta shaararka ciidamada oo iyaguna sameeya falal dhac iyo kufsi ah.